Bit By Bit - Intshayelelo - Yintoni oza kufunda ngokulandelayo
I-ink blot (icandelo 1.1)
Ukufumana inkcazo ecacileyo yeprojekthi yeBlumenstock kunye noogxa nabo, funda isahluko 3 sale ncwadi.
Siyakwamkela kwi-digital age (icandelo 1.2)
Gleick (2011) inikeza umxholo wembali lweenguqu ekuphatheni komntu ukuqokelela, ukugcina, ukuthumela, nokucwangcisa ulwazi.
Ukwenza isingeniso kwixesha ledijithali elijolise kwiimpazamo ezinokubakho, ezifana nokuphulwa kwangasese, bona Abelson, Ledeen, and Lewis (2008) kunye Mayer-Schönberger (2009) . Ukwenza isingeniso kwixesha ledijithali elijolise kumathuba, khangela Mayer-Schönberger and Cukier (2013) .
Ngezinye iinkcukacha malunga namafemu adibanisa ukuhlolwa kwisenzo esiqhelekileyo, bona Manzi (2012) , kunye nokunye malunga neendlela zokulandelela iinkqubo kwihlabathi elingokoqobo, khangela Levy and Baracas (2017) .
Iinkqubo zeminyaka yobudala beDijama ziba zixhobo zombini kunye nezinto zokufunda. Umzekelo, unokufuna ukusebenzisa i-media media ukuze ulinganise imbono yoluntu okanye unokufuna ukuqonda impembelelo yeendaba zoluntu kwimbono yoluntu. Kwimeko enye, idijithali isebenza njengesixhobo esinceda wenze umlinganiselo omtsha. Kwesinye imeko, i-digital system yinto yokufunda. Ngolunye ulwahlulo olu phawu, bona Sandvig and Hargittai (2015) .
Uyilo lophando (icandelo 1.3)
Ngolunye ulwazi malunga nokucwangciswa kophando kwizenzululwazi zentlalo, bona King, Keohane, and Verba (1994) , Singleton and Straits (2009) kunye Khan and Fisher (2013) .
Donoho (2015) ichaza isayensi yolwazi njengemisebenzi yabantu abayifunayo kwi-data, kwaye inika imbali yesayensi yolwazi, ilandele imvelaphi yengqondo kwintsimi kubafundi abafana noTukey, iCleveland, iChambers kunye neBraiman.
Kuluhlu lweengxelo zomntu wokuqala malunga nokuqhuba uphando loluntu kwixesha ledijithali, bona Hargittai and Sandvig (2015) .
Izihloko zale ncwadi (icandelo 1.4)
Ukufumana okunye malunga nokuxuba idatha ekulungele ukulungiswa, khangela Groves (2011) .
Ukufumana okungakumbi malunga nokungaphumeleli "kweengxelo," funda isahluko 6 sale ncwadi. Inkqubo efanayo efana ne-Blumenstock kunye nabalingane abasetyenziselwa ukunyusa ubutyebi bentuntu nayo ingasetyenziselwa ukuphazamisa iimpawu zobuqu, ezibandakanya ukuxhatshazwa ngokwesondo, ubuhlanga, inkolo kunye nezopolitiko kunye nokusetyenziswa kwezidakamizwa (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) .